Ogaden News Agency (ONA) – Xuskii Sananad guuradii 27aad oo lagu qabtay magaalada Johannesburg
Xuskii Sananad guuradii 27aad oo lagu qabtay magaalada Johannesburg
Posted by ONA Admin	/ September 26, 2011
Magaalada Johannesburg oo ah xarunta gacansiga dalkan koonfur Africa ayaa xaflad balaadhan oo lagu xusayo munasabadaa lagu qabtay xalay. Munaasabadan oo bilaabatay abaaraha 7dii fiidnimo ayaa waxaa daadihinayay halgame Maxamed Daahir Colyaye.
Waxaa ugu horayn codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay Sheikh Cali gacan oo shirka kufuray aayada quraan ah iyo wacdi diini ah. Sheekha ayaa dadka munaasabadda fadhiyay kula dardaarmay cabsida Ilaahay iyo fariimihiisa loo hogaansamo.
Intaa ka dib ayaa gudoomiyaha faraca Guateng halgame Mukhtar Cali Gurxan lagu soo dhaweeyay madasha isagoo ugu horayn u mahadnaqay dadweynaha kasoo qaybgalay xafladda. Gudoomiyaha ayaa war bixin dhinacya badan tabanaya oo munaasabadda ku saabsan iyo xaalada dalka Ogadenia iyo somaliyaba siiyay dadwaynihi goobta fadhiyay isagoo uga waramay xag siyaasadeed iyo xagga abaarahaba.
Gudoomiyaha ayaa mar uu ka hadlayay siyasadda guracan ee gumaysig ku sheegay inuu isku dayahayo inuu u soo raro wadamada dariska ah dagaalkii gudaha Ogadenya ka socday, balse uu ku guuldaraystay ujeedadii uu ka lahaa.
Waxaa sidoo kale codbaahiya lagu soo dhaweeyay halgame Muxumed qonboq oo taariikhdii iyo sidii lagu aasaasy jabhadda ONLF yo marxaladihii ay soo martay iyo heerka ay hadda marays aad uga sheekeeyay. Wuxuuna ugu danbayntii kula dardaarmay dhalinyarada inayna marnaba ka tagain dhaqankooda.
Waxaa iyagana shirka joogay oon ka maqanayn odayaal dhaqameedka jaaliyadda. Ugaas Maxamed Cabdi Diiriye (qooqani) ayaa dadweynaha kala hadlay danahooda. Ugaas ka ayaa sheegay in halganka loo dhabr adaygo, wuxuuna ku booriyay shacabka Ogadenya inay halkaas ka sii wadaan halganka iyo iska caabinta gumaysiga.
Shariiif Daahir ayaa isaguna ka hdlay xafladda oo uga digay dhamaan dadwaynaha Somaliyeed gaar ahaan umadda Ogadenya shirqoolada cadowga uu umadda ku kala qaybinayo. Wuxuuse mar qudha sacab iyo sawaxan is-qabsaday markuu Shariif Dahir ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inuu u shihiido qadiyadda Ogadenya.
Xafladda oo ay kasoo qaybgaleen bulshada qaybaheeda kala duwan sida odayasha, dhalinyarada, hooyooyinka, ayaa waxaa isha soo jiidanayay dumarka jaaliyadda oo ku labisnaa, dhar laga tolay calnka Ogadenia.
Waxaa shirka ka hadlay oo kale halgame Maxamed Axmed Shuuriye,(mash) isagoo ku hadlayay magaca ururka dhalinyarada OYSU, waxuuna aad ugu nuux-nuuxsaday in dhalinyadu ka faa’iidaystan, wakhtigooda. Mar uu mudane mash ka hadlaayay xoogaga dhalinyarada ayuu sheegay in dhalinyarada Ogadenya aanay ka xumayn dhalinyadii Masar iyo Tunisia iyo Libiya oo iska xoreeyay xukuumadihii macangaga ahaa. Sidoo kale in iyagna looga baahan yahay inay dalka ka xoreeyaan gumaysiga Itobiya.
Waxaan goobta ka maqnayn dhalinyarada OYSU faraca SA oo soo bandhigay dhaanto aad u qiimo badnayd aadna loo xiisaynayay, dadwaynuhuna ayba sugi la,aayeen intay so galayeen .
Xaflad oo ugu yaraan ay kasoo qayb galeen dadweyne gaaraya 400 oo qof ayaa waxay ku soo dhamaatay waji farxadeed iyo ballan qaad in halganka lagarab istaago.
Mahamed ikhyaar/Johannesburg – ONA